Lovia taratasy, kaopy taratasy, boaty sakafo antoandro, napkin - Chang Liang
manana mpiasa matihanina sy fitaovana matihanina izahay
Manana fitaovana famokarana malaza eran'izao tontolo izao izahay, fahaiza-manao avo lenta, kalitao tsara, raha toa ka ampy ny baikonao, dia matanjaka ny fahafahantsika.
Ningbo Changliang Paper Products Co., LTD. naorina tamin'ny 2019, dia ao amin'ny Ningbo City, akaikin'ny Ningbo seranan-tsambo sy Shanghai Port. Ny vokatra lehibe: Ny orinasa dia famokarana manokana: takelaka taratasy, boaty sakafo antoandro, kaopy taratasy, napkins, antokon'olona ary vokatra taratasy hafa mitarika orinasa. Ny vokatray rehetra dia nandalo ny fitsapana momba ny kalitaon'ny sakafo sy ny fanaraha-maso.Ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana teknolojia: manana mpiasa matihanina sy fitaovana matihanina izahay, afaka manome anao tsy afaka mamaha ny olana.
MITSIDIKA ny fivarotana